Hab-dhaqanka ugufiican ee Jadwalka saxda ah ee Qoraalada Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Jadwalkaaga qoraalladaada warbaahinta bulshada waa inay qayb muhiim ah ka noqotaa istiraatiijiyadda suuqgeynta warbaahinta bulshada, oo aan loo baahnayn in la yiraahdo, waxay leedahay faa'iidooyin badan. Marka laga reebo inaadan ka fekerin ku dhajinta dhowr barnaamij oo warbaahinta bulshada ah dhowr jeer maalintii, waxaad sidoo kale ilaalin doontaa jadwal isdaba joog ah, qorsheyso waxyaabo waqti xasaasi ah, oo aad yeelato saami wadaag wadaag caafimaad leh maadaama aad horay u qorsheyn karto ka hor.
Halkii aad ka ahaan lahayd baraha bulshada xilli kasta maalin kasta, jadwalku wuxuu kuu badbaadinayaa waqti qiimo leh oo aad ugu adeegsan karto kobcinta ganacsigaaga. Haddii aadan ogeyn meesha aad ka bilaabeysid, waxaan ku siin doonnaa hababka ugu fiican ee jadwalka saxda ah loogu qoro barahaaga bulshada.
Ku dhaji Waqtiyada Wanaagsan
Sababtoo ah algorithms-ka isbeddelka ah ee ku yimaada istiraatiijiyadaha kala duwan ee warbaahinta bulshada, ku dhajinta waqtiyada saxda ah ee xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada waa lagama maarmaan haddii aad rabto in qoraalladaada ay ogaadaan dad badan intii suurtagal ah. Iyada oo tirada dadka adeegsada baraha bulshada ay sii kordhayaan maalin kasta, baraha bulshada ee wararka ay ka qoraan weligood dhaqso uma dhaqaaqin.
Aragtida iyo falanqaynta ayaa ah hal dariiq oo aad ku ogaan karto waqtiyada kuwa ugu fiican. Si fudud u fiirso marka dhagaystayaashaadu ay ugu firfircoon yihiin khadka tooska ah isla markaana dhaji waqtiyadaas. Taas ayaa lagu yiri, haddii aad rabto inaad hesho aragti dheeri ah, waxaad isticmaali kartaa aaladda jadwalka warbaahinta bulshada. Qalabka noocan ah ayaa ku siin doona waqtiyada dhajinta ee ugu habboon mar kasta tan iyo markii ay isticmaalaan algorithm si loo go'aamiyo waqtiyada ugu fiican.
U halgamaya la socoshada maareynta in ka badan hal koontada warbaahinta bulshada? Fiiri hagahan ballaadhan sida loo maareeyo xisaabaadka badan ee warbaahinta bulshada oo arag waxa ku habboon dhaqanka.
Tayaynta Joogtadaada Boostadaada - Ogow Inta jeer ee wax la Dirayo
"Immisa jeer ayaan u diraa cinwaankeyga Facebook / Twitter / Instagram?" waa mid ka mid ah su'aalaha inta badan la isweydiiyo marka ay timaado istiraatiijiyadda waxyaabaha ku saabsan warbaahinta bulshada. Nasiib darrose, ma jiro lambar dahabi ah oo khuseeya barnaamij kasta oo warbaahinta bulshada ku saabsan. Si kastaba ha noqotee, barnaamij kasta wuxuu u shaqeeyaa si ka duwan, laakiin dhagaystayaal kasta sidoo kale way ka duwan yihiin, sidaa darteed waxay yeelan doonaan shuruudo iyo filashooyin kala duwan.
Hal shay ayaa hubaal ah - dhajinta badiyaa ma kordhinayso gaadhistaada ama kor uma qaadi doonto dhagaystayaashaaga si dhakhso ah. Taas bedelkeeda, koontadaadu waxay u imaan kartaa inay tahay mid spammy ah, markaa waxaad dhab ahaan u lumin kartaa kuwa raacsan.
Hal dariiqo oo lagu ogaan karo inta jeer ee ay tahay inaad ku dhejiso barnaamij kasta oo warbaahinta bulshada ah waa tijaabinta. Isniinta, aan dhahno, waxaad diri kartaa hal qoraal. Ka dib maalinta Talaadada ah tirada ka dhig laba boosteejo, maalinta Arbacada ah seddex, iyo wixii la mid ah. Toddobaadka soo socda hubi fikradahaaga ama falanqayntaada oo isbarbar dhig.
Waxaa jira qaab aad uga fudud oo lagu ogaan karo waxa uu yahay lambarka saxda ah, taasna sidoo kale waxaa lagu sameyn karaa iyada oo loo marayo aaladda jadwalka warbaahinta bulshada. Tan markii la dhaho, aan ku siino xoogaa talooyin ah markay tahay soo noqnoqodkaada dhejinta.
Facebook, 1 - 2 jeer maalintii.
Twitter, 3 - 5 + jeer maalintii.
Instagram, 1 - 2 jeer maalintii.
LinkedIn, 2 jeer maalintii.
Pinterest - 5 + jeer maalintii.
Google+, 1- 3 jeer maalintii.
Samee Jadwalka Dhajinta ee Loogu Talo Galay Qoraallada Evergreen
Inaad si joogto ah uga dhex muuqato baraha bulshada ma aha wax fudud; ka dib oo dhan, waa inaad si joogto ah u siisaa waxyaabaha ku saabsan kuwa raacsan barnaamijyada kala duwan. Si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maaha in qoraal kasta la daabaco oo keliya hal mar. Taas bedelkeeda, qoraallada qaarkood waxay ku habboon yihiin waqti dheer iyagoo had iyo jeer daneynaya dhagaystayaashaada. Dib-u-dhajinta waxyaabaha weligood-cagaaran waa hab fiican oo lagu siiyo dhagaystayaashaada waxa ay doonayaan iyadoo la siinayo qiimo istiraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabahaaga. Marka, sidee ku ogaan kartaa qoraallada weligood cagaaran iyo inta jeer ee ay tahay inaad dib u dhigto?
Qoraalada Evergreen waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin qoraaladaas kuwa aan waqtiga xasaasi aheyn oo qiimo ku bixiya waqti dheer. Hal dariiqo oo aad ku ogaan karto mid ka mid ah qoraaladaada weligood cagaaran ayaa ah inaad gacanta ku raadiso quudintaada iyadoo la raacayo waxa ku jira iyo tirada jecel iyo faallooyinka. Kadib gacanta gacanta jadwal u samee midwalba markaad raadineyso waqtiyada dhajinta ugufiican.
Hab kale ayaa ah, waad qiyaastay, adoo adeegsanaya aaladda jadwalka. Qaar ka mid ah qalabkani kuma caawin karaan oo keliya inaad heshid qoraalladaas kuwa leh kuwa ugu badan ee jecel, faallooyinka, iyo saamiyada, laakiin sidoo kale waxay jadwal u sameeyaan waqtiyada ugu habboon ee dhajinta ee akoonnada warbaahinta bulshada.
Adeegso Qalabka Jadwalka Baraha Bulshada
Markii aan ka wada hadalnay dhajinta waqtiyada saxda ah, adoo hagaajinaya soo noqnoqoshadaada, iyo sidoo kale jadwalka waxyaabahaaga weligaa cagaaran, waxaan soo sheegnay adiga oo adeegsanaya aaladaha jadwalka ee warbaahinta bulshada inaadan kaliya noqon doonin kuwa ka waxtar badan, laakiin waxaad badbaadin doontaa waqti qiimo leh sidoo kale. Waxaa jira aalado jadwal oo badan oo kala duwan oo warbaahinta bulshada ah oo laga kala xusho, si kastaba ha noqotee, badankood waxay bixiyaan isla laba sifo oo isku mid ah. Midka hore ayaa ah, sida muuqata jadwal u sameynta qoraaladaada mid kaliya maahee akoono badan oo warbaahinta bulshada ah. Midka labaad waa falanqaynta aadka loogu baahan yahay ee kuu adeegi kara si aad u ogaatid dhagaystayaashaada oo aad u horumariso istiraatiijiyaddaada content.
Xilligan iyo da'da, ku dhowaad ma jiro ganacsi casri ah oo shaqeyn kara iyada oo aan la joogin ugu yaraan hal, haddii aysan ka badnayn baraha bulshada. Tani waa sababta jadwalku u yahay mid aad muhiim u ah haddii aad rabto inaad waqti u hesho inaad waxyaabo kale sameyso si aad u kobciso meheraddaada halkii aad ka joogi lahayd taleefankaaga oo aad mar walba dhajiso. Sidaa darteed, dooro aaladda jadwalka sida Amplifr oo fiirso sida ay noloshaadu wax badan uga fududaanayso inta ganacsigaagu kobcayo!
Saxiix U Samee Amplifr
Tags: amplifrwaqtiga ugu fiicanqoraallo weligood ahdhajinta soo noqnoqdaqoraalo la qorsheeyayinta jeer ee warbaahinta bulshadajadwalka warbaahinta bulshada
Nate waa aasaasihii Amplifr, waa adeeg caawiya shakhsiyaadka iyo ganacsiyada iyagoo si otomaatig ah u jadwalaynaya qoraalladooda baraha bulshada, iyagoo ka caawinaya inay helaan lacag badan. Iyadoo asal u ah maareynta wax soo saarka, horumarinta ganacsiga, iyo kobaca caalamiga, wuxuu ujeedkiisu yahay inuu caawiyo shakhsiyaadka iyo ganacsiyada isagoo tusinaya sida ay ugu sii wadi karaan inay u kobciyaan dhagaystayaashooda si faa'iido iyo hufnaan leh.